Maxey Tahay Sababta Keentay Burburkii Diyaarad Itoobiyan Airline? XOG CULUS | Xaqiiqonews
Maxey Tahay Sababta Keentay Burburkii Diyaarad Itoobiyan Airline? XOG CULUS
Buburka ku yimid diyaaradda Itoobiyan Airline oo ku jirtay duulimaad ku wajahnaa Nayroobi ayaa noqonaya burburkii labaad oo noociisa ah oo dhacay muddo afar bilood gudahood ah.
Website-ka “Flightrader 24” oo wax ka qora arimaha safarada cirka ayaa faafiyey sababta ugu weyn ee loo maleynaayo in ay keentay burburka Diyaaradda Itoobiyan Airline.
Sida xaqiiqonews ay soo tarjuntay diyaaradda oo nooceedu ahaa “”Boeing 737 800 Max” ayaa waxaa ay u burburtay cilad la xariirta “Duulis Xawaare ah” oo ay dooneysay diyaaraddu in ay hawada ku gasho, arintaasi oo keentay gebi ahaanba in ay dhintaan 157 qof oo saarneyd diyaaradda.
Marka la tixraaco Macluumaadka “Flightrader 24” ciladda ayaa ka timid xagga duuliyaasha diyaaradda, waxaase jira xogag intaasi ka badan oo ay tahay in la ogaado.
Farsamada Boeing: afar bilood ka hor diyaarad kale oo farsamadeeda ay leedahay shirkadda Boeing ayaa ku burburtay Indonesiya, diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 737 Max 8 ” oo ay laheyd shirkadda Lyon Air ayaa sababtay dhimashada 188 qof.
Rachayo Otomo oo Indonesiya u qaablisan guddiga qaranka ee badqabka gaadiidka cirka ayaa sheegay in diyaaraddii Indonesiya ku burbtay, ka hor labo maalin intii ay burburin in ay la kulantay cilado la xariira badhanka qaabilsan “Duulinta iyo Xawaawreynta diyaaradda.
Marka aad isku fiiriso burburka labada diyaaradood oo labaduba ka mid ah diyaaradaha ay sameyso shirkadda Boeing ee Mareykanka, waxaa soo baxaya su,aalo dhowr ah oo la iska weydiin karo badqabka diyaaradahan jiilka afaarad ee ay sameyso shikradda Boeing.